Le yeyona dolophu intle kwihlabathi ngokuya nge-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Agasti 3, 2019 0 IiCententarios 655
Ibizwa ngokuba yiHallstatt kwaye abanye abantu be800 bahlala. Yidolophana entle yeAlpine embindini weOstriya kwaye ineentaba, ichibi elihle kunye nemilambo. Uqwalaselwa eyona dolophu intle ehlabathini Ukuvota ngabantu abaninzi.
Kuhle kakhulu ukuba ngonyaka u-1997 wabhengezwa njengeNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi yi-Unesco. Kwiindawo ezijikeleze le dolophu kukho iiAlps, elona chibi lidumileyo kwaye linembali eyimbali eyakhiwa ngexesha lamaRoma namaCelts.
Idume njani le dolophu incinci?
Impendulo ilula, i-Instagram. Ukuba nomxholo onomdla wezembali kwaye ujikelezwe ubuhle bendalo, kubangele abakhenkethi abadlula edolophini ukuba bafake iifoto kwii-akhawunti zabo ze-Instagram. Kukho yonke into, ingcali okanye iifoto ze-amateur ezikonwabele ukuhlala kule ndawo yomlingo.
Thatha uvavanyo kwaye ujonge kwi-Instagram, uya kufumana ngaphezu kwe-200.000 iziphumo. Nokuba iifoto ezineeefiltha okanye ngaphandle kweefilitha ziyafana, ubuhle bendalo bugqitha naluphi na ulindelo. Jonga ezi foto zilandelayo kwi-akhawunti ye-Instagram:
Ushicilelo ekwabelwana ngalo ngu-DARWIN (@darwinphotography) el I-Aprili 13 isuka kwi-2017 ukuya kwi-3: 41 PDT
IHallstatt, e-Austria // uFebruwari 2016 ???????? Usuku lokugqibela lohambo lwam lwendlela ebusika kunye @lmt_ kunye @muenchmax ✌ ???? ️ @ beautifuldestitions #beificentdestitions
Ushicilelo ekwabelwana ngalo ngeJACOBRIGLIN (@jacob) kwi I-4 ukusuka kuJan isuka kwi2017 ukuya kwi4: 19 PST
Ushicilelo ekwabelwana ngalo ngo İlhan Eroğlu (@ilhan1077) kwi I-30 ukusuka kwi-Aug ukusuka kwi-2016 ukuya kwi-6: 45 PDT
#Hallstatt #Austria ngu @golden_heart #travel
Ushicilelo ekwabelwana ngalo nge-Austria Guides (@austriaguides) kwi I-Aprili 19 isuka kwi-2017 ukuya kwi-9: 58 PDT
???? Hallstatt Austria ???? ????
Ushicilelo ekwabelwana ngalo malunga neeVoti zeSell Rreth (@vende_rreth_botes) kwi I-Aprili 18 isuka kwi-2017 ukuya kwi-4: 40 PDT
Abakhenkethi abaninzi baseAsia bafumene ithuba lokutyelela idolophu yaseAustria. Obo buhle ukuba inkampani yezimbiwa e China idale ikopi ngqo eCanton. Bazenzile izindlu ngokungafaniyo, isikwere apho intengiso ikhoyo, izakhiwo eziphambili kunye nezinye iinkcukacha zokomfuziselo.
Ekuqaleni kubonakala ngathi oku akuhlalanga kakuhle kubemi balapha kodwa emva kwezivumelwano ezininzi usodolophu wedolophu utyikitye isivumelwano nenkampani yase China yokuthatha ukhenketho kwidolophu yasekuqaleni.
# Hallstatt # discoveraustria # Yurve2017 # ihambele uhambo # uhamboaddict # umendo wokuhambahamba # indalo yokubonisa # indalo # indalo
Isithuba ekwabelwana ngaso ngu-Erwin Herry (@ ezintlanu.feet.eleven) kwi I-Aprili 25 isuka kwi-2017 ukuya kwi-2: 10 PDT
Ngaba ucinga ukuba yeyona dolophu intle ehlabathini? Njengoko ubonile yindawo enomtsalane enezinto ezininzi ezimangalisayo zomhlaba. Ukuba uhlala undwendwela, ungathandabuzi ukuthatha iifoto ezimbalwa kwaye uzilayishe kwi-Instagram.
Yongeza nje #hallstatt emfanekisweni kwaye uya kuyifaka kulawulo lwemifanekiso enxulumene nedolophu. Ndazise kwaye ndizokulandela 😉
1 Idume njani le dolophu incinci?
2 AmaTshayina ayikope
Iingcebiso ezisibhozo zokuthengisa kwidijithali zemivalo kunye neeresityu